Na dia Eo Aza Ny Mpitarika Vaovao, Mbola Marefo ny Hoavin’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2012 10:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, македонски, English
Nandritra ny herinandro no nanatontosàna ny faha-18 ny Kongresy Nasionalin'ny Antoko Komonista Sinoa ary nifarana tamin'ny 14 Novambra 2012 teo. Taranaka mpitarika vaovao, izay tarihin'i Xi Jinping sy Li Keqiang, no nisolo toerana ny ekipa mpitarika teo aloha izay notarihin'i Hu Jintao sy Wen Jiabao.
Raha tonga teo amin'ny fahefana i Hu sy Wen folo taona lasa izay, nihevitra ny fampahalalam-baovao mpanohana ny fanovana ara-politika, indrindra ny Southern Daily Group fa hanokatra pejy vaovao momba ny fanavaozana ny lalàna sy ny politika ny mpitarika vaovao tamin'izany. Saingy nifarana ny folo taona nitondran'i Wen, ary nanjary karazana fepetram-pitantanana ara-tsosialy sisa ny lova navelan'izy ireo [zh] mba hanaraha-maso tsara ny tsy fiovaovana, ny fitomboan'ny fiarovam-pirenena, ny fanaovana ho tanandehibe ao anatin'ny fotoana fohy ny any ambanivohitra sy ny fitomboan'ny harin-karena faobe (PIB) haingana. Mibaribary fa diso fanantenana [zh] ny mponina noho ny tsy fisian'ny fanatsarana ny lalàna sy ny politika. Mbola manohina loatra ny firesahana ny lasa eo amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Miompana any amin'ny folo taona hoavin'ny mpitarika vaovao ny feo amin'ny ankapobeny ao amin'ny fampahalalam-baovao fehezin'ny fanjakana. Saingy ao amin'ny fampahalalam-baovao sosialy kosa, misokatra kokoa amin'ny tsikera ireo mpiserasera.
Ny faha-18n'ny Kongresy Nasionaly Congress of the Communist Party of China. Photo from Voice of America. Public Domain.
Mpahay lalàna momba ny zon'olombelona Guo Feixiong nilaza ny fijeriny mikasika ny 10 taona lasa tao amin'ny forum ho an'ny olom-pirenena [navoaka tao amin'ny bilaogy Charter 08 izany fijeriny izany]:
Tao anatin'izay folo taona izay, niha-nahazo vahana tanteraka ny kolikoly teo amin'ny sehatry ny toekarena ary nahatratra taha ambony indrindra teo amin'ny tantara. Ny fianakaviana mpanankarena, ny manampahefana manana tombotsoa manokana sy ireo vondrona nomena tombontsoa manokana no sokajiana ho hery telo lehibe eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny… miha-mahazo vahana hatrany ny habetsaky y harena angonin'izy ireo amin'ny fanaovana tantely afa-drakotra ny hare-pirenena ary voahilika amin'izany fanangonan-karena haingana izany ny [vahoaka] ambany saranga. Ny sasany nanjary mpitrongy vao homana noho ny fahalafosan'ny fitsaboana, ny fampianarana sy ny fiantohana ara-tsosialy. Amin'ireo disitrika ambanivohitra sasany izay nahazo tombony tamin'ny fandrosoan'ny toekarena, kanefa noho ny fisian'ny fanambakana tamin'ny tany aman-trano, nidiran-trosa be ireo fianakaviana saranga antonony. Noho ny fitontongan'ny toekarena, tsy afaka mamelon-tena araka ny tokony izy intsony ny tanora ankehitriny. Ny tombotsoany manokana no nahamaika ny manampahefana ao amin'ny governemanta ka tsy nisy intsony ny fizarana tombotsoa mitovy. Tsy mety mahita vahaolana ireo vahoaka ka mahatsiaro diso fanantenana sy kivy.
Ny ahiana indrindra dia avy amin'ny rafi-pikirakirana ny fitombenan'ny toekarena… Ny fampijaliana ireo saranga sosialy dimy vaovao no niteraka fahavalo im-10 avo heny nandritra ny vanim-potoana taorian'ny jadona. Niteraka tahotra lehibe izany ary niezaka izy ireo hanala izany tahotra izany tamin'ny alalan'ny fampiasana herisetra. Voafandrika ao anatin'ny ranomodin'ny famoronana fahavalo sy tahotra ry zareo ary nandà tsy nety hihavana [amin'ny mpanohitra].
Tao amin'ny habaka fandefasana lahatsoratra bitika, mampiseho ny fahadisoam-panantenany i Guo mikasika ny tombana tamin'ny folo taona lasa nitantanan'i Hu-Wen. Ireto ambany ireto ny fantina tamin'izany fanehoan-kevitra izany [zh]:
Shandong Li: Folo taona lasa, nanana fanantenana lehibe ny vahoaka tamin'ny alalan'ny politika vaovao, saingy nampadiso fanantenana ny vokatr'izany. Folo taona taty aoriana, tsy manam-panantenana izahay araka izany tsy hisian'ny fahadisoam-panantenana.
Angry youth Zhang Longyao: Folo taona lasa, tonga ianao ary feno fanantenana ny vahoaka. Nihevitra izahay fa hisy ny politika vaovao. Saingy tao anatin'izay folo taona lasa izay, ny fananan-tany haingana, ny kolikoly, sy ny hantsana mampisaraka ny manankarena sy ny mahantra no hitanay. Na dia izany aza, mbola nanantena izahay fa afaka mitondra fanovana ianao alohan'ny handaozanao ny fitantanana. Kanefa toran-kovitra ianao manoloana ilay sahobakaka izay lazaina fa maty [midika hoe Jiang Zeming]. Nandiso fanantenana ireo rahalahinao izay nanohana anao sy nametraka ny fahatokisany taminao nandritra izany taona izay ianao.
Pang Hongyuan: Nilaza ny sasany fa efa vita ny amin'i Hu. Tsy mino aho. Raha ny tena izy, (mandritra ny alina, mivolombatolalaka avokoa ny saka rehetra) raha tsy misy fahazavana , mitovy avokoa ny mpitarika rehetra. Nanjary vazivazy ankehitriny ny vaovao nandritra ny herinandro izay nidera ny fiverenan'ilay antsoina hoe politika vaovao.
t-sd: Mbola tsy tafapetraka foana hatramin'izao ilay lazaina fa politika vaovao Hu-Wen. Mbola ratsy indrindra noho ny tamin'ny taona 1992 hatramin'ny 2002 ny fandrosoana noentin'i Hu-Wen nandritra ny folo taona 2002-2012.
Suddenly free: Aza milaza amiko fa maranin-tsaina, mahavita zavatra, mahery ranona na i anona. Jereo fotsiny ny folo taona lasa sy ny politika vaovao an-dranona na i ranona! Folo taona nihemorana. Tsy fantatro raha handroso amin'ny folo manaraka, maniry fotsiny aho fa tsy hihemotra intsony isika.
Mpanao matoan-dahatsoratra Liu Shenjun: [Ny fanantenako amin'ny folo-taona hoavy] 1. Tsy mila mividy vovondronono any ivelany ho an'ny zaza intsony; 2. Afaka mahita sakafo ara-pahasalamana eny amin'ny magazay lehibe; 3. Tsy mila ho andevon'ny varotra momba ny tany aman-trano intsony ny mpiasa birao; 4. Tsy hiharatsy intsony ny fahalotoan'ny tontolo iainana; 5 Tsy hiha-lalina intsony ny hantsana mampisaraka ny mahantra sy ny mpanankarena; 6 Tsy hitsoaka any ivelan'ny firenena ireo mpandraharaha; 7. Tsy dia misy kolikoly intsony eo amin'ireo manampahefana; 8. Tsy ho fitaovana famokaram-bola intsony ny tsenam-bola fa ho tsena fampiasam-bola; 9. Tsy mila miankina amin'ny ray aman-dreniny intsony ny olona vao hisondrotra ambony eo amin'ny fiarahamonina, ary hanana anjara mitovy (égalité de chance); 10. Fahafahana mifehy kokoa ny fahefan'ny manampahefana.